Ciidanka NISA oo gacanta ku dhigay mooto kusoo jeeday Muqdisho oo ay ka buuxaan walxaha qarxa – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Ciidanka NISA oo gacanta ku dhigay mooto kusoo jeeday Muqdisho oo ay ka buuxaan walxaha qarxa
Wararka naga soo gaaraya degmada Afgooye ee gobolka Sh/hoose ayaa sheega in ciidanka nabad-sugidda qaranka Soomaaliya ee NISA ay degmadaasi ku qabteen mooto nooceedu yahay Bajaaj islamarkaana ay saarnaayeen walxaha qarxa iyo ninkii waday.
Saraakiisha NISA oo la hadlay warbaahinta Bulshoweyn ayaa u xaqiijiyay in mootada oo aheyd nooca loo yaqaano dhug-dhugleyda, taas oo lasoo saaray jaakadaha walxaha qarax lagu soo xiray iyo walxo kale oo qarxa.
Sidoo kale, waxay saraakiishaasi inoo sheegeen in haatan ay gacanta ku hayaan mootadii iyo ninkii waday, iyagoona tilmaamay inay baaritaano ku sameynayaan halka ay mootadaan kusii jeeday iyo cidda ay u rarneyd.
Warar madax banaan oo ay warbaahinta Bulshoweyn heleeyso ayaa sheegaya in mootadaasi ay kusii jeeday magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya, si halkaas qaraxyo waaweyn looga fuliyo.
Dhinaca kale, dagaalyahanada Al-shabaab ayaa la sheegaa in degaanada ku yaala gobolka Sh/hoose ay aad ugu fir-fircoon yihiin dagaalka xoogan ay kula jiraan ciidamadda dowladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa AMISOM, iyagoo weerar ku dhufoo ka dhaqdhaqaaq ah xilliyadda qaarkeed ku qaada.
Ugu dambeyntii, waxaa haatan magaaladda Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliyaa isku diyaarinayaa qabashada doorashadda guddoonka baarlamaanka iyo mida madaxweynaha Soomaaliya, iyadoo maantana ay xildhibaanada baarlamaanku dhageysteen khudbadaha 10 murashax oo u tartamaya guddoonka baarlamaanka Soomaaliya.